Nkọwa:Ụlọ ikpe Tennis,Ejiri Achịcha Ụlọikpe Tennis,Ụlọikpe Tennis Ụlọikpe na-enwu ọkụ
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Egwuregwu Egwuregwu Football > Egwuregwu Egwuregwu Tennis nke 500W maka HPS 1500W
Ihe Nlereanya.: BB-LD-500W-CQ
Nke a dị elu Ụlọikpe Tennis Tenis nwere ìhè lumen nke 65,000 na ikuku nke ogo 120. Egwuregwu dị elu nke 5000K Ụlọ ọkụ na-agba agba na Tennis bụ ihe dị mma maka ịmepụta nnukwu ámá stadium, ebe ndị egwuregwu na egwuregwu dị ka ụlọ ịgba bọl basketball, ụlọ tennis na ebe ndị bọl, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ buru ibu. Ụlọikpe Ụlọikpe Tennis a nwere ikikere ntinye nke Ingress nke 65, nke pụtara uzuzu kpuchie ma chebe ya pụọ ​​nmikpu mmiri. Egwuregwu nke egwuregwu tennis a na- enwu tinyere IP65 na-achọpụta na ntinye gị na-enye ihe ndị ahụ.
Ụlọ ọkụ tennis anyị maka ire ere Ejiri ya mezuo uzuzu nke oma iji kwue ihe di ka 50,000+, wepu ihe di mkpa iji dochie anya gi. Site na dochie 1500W HIP / HID / MH bulbs / fixtures na oche elekere tennis elekere 500W ị na-ebelata ọkụ eletrik gị ruo 80%.
Ụlọ ikpe Tennis Ejiri Achịcha Ụlọikpe Tennis Ụlọikpe Tennis Ụlọikpe na-enwu ọkụ Ogige Ụlọikpe Tennis Ụlọikpe Tennis Tennis Ụlọikpe Tennis na Ìhè Ụlọ Echere Ụlọikpe Tennis Ụlọikpe Tennis Tennis Mkpuchi